Bangladesh - nipoaka ny herisetra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Bangladesh - nipoaka ny herisetra
Desambra 15, 2013
Ny fitsangatsanganana sy ny fizahantany any Bangladesh dia mety tsy ho tsara torohevitra amin'izao fotoana izao.
Ny fitsangatsanganana sy ny fizahantany any Bangladesh dia mety tsy ho tsara torohevitra amin'izao fotoana izao. Ny fifanenjanana ao Bangladesh dia nihanahazo vahana hatramin'ny namonoan'ny governemanta ny mpitarika ny Jamaat-e-Islami niaraka tamin'ny loharanom-pahalalana teny an-toerana nilaza fa farafahakeliny olona enina no maty ary am-polony maro naratra tamin'ny herisetra vaovao nanerana ny firenena Aziatika Tatsimo ny sabotsy teo.
Olona enina farafahakeliny no maty ary marobe hafa naratra tany Bangladesh satria nitohy ny fihetsiketsehana taorian'ny namonoana ny lehiben'ny mpanohitra, Abdul Quader Mollah.
Ny telo tamin'ireo niharam-boina dia mpikomy izay maty voatifitra rehefa nitifitra ny polisy tao an-tanànan'i Companyganj. Nisy telo hafa novonoina tamin'ny herisetra toy izany ihany koa tao amin'ny tanàna avaratry Ramganj.
Nilaza ny polisy any an-toerana fa nipoaka ny herisetra taorian'ny fanorenan'ny mpanohana an'i Jamaat ny biraom-panjakana ary nanafika ny fivondronan'ny parlemantera niaraka tamin'ny antokon'ny fitondrana.
I Bangladesh no sehatry ny hetsi-panoherana feno hatezerana hatramin'ny nanantonana an'i Molla noho ny heloka bevava nataony roa andro lasa izay. Farafahakeliny olona 12 no maty ary an-jatony maratra tamin'ny fifandonana nanomboka tamin'izay.
Ny fanatanterahana azy dia nahatonga fanamelohana be dia be avy amin'ireo mpiray dina politika sy vondrona iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona.
Ny fanatanterahana ny laharam-pahamehan'ny mpanohitra dia notanterahina ora maro taorian'ny nanalan'ny Fitsarana Tampon'i Bangladesh ny fampiakarana fitsarana ambony azy.
Tany am-ponja i Molla tamin'ny voalohany dia voaheloka higadra mandra-pahafatiny tamin'ny volana febily noho ny fiampangana azy ho nanao heloka bevava. Saingy nohamafisina ny sazy rehefa nampakatra fitsarana ambony izy.
Ny mpanohitra Bangladeshi dia miampanga ny governemanta ho nitady hanampenam-bava azy ireo tamin'ny fametrahana ny mpitarika azy ireo noho ny heloka bevava nataony tamin'ny efa-polo taona lasa izay.
Nilaza ireo mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona fa tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fomba ara-dalàna ao amin'ny fitsarana.
Nidina an-dalambe tamina tanàna lehibe tao Bangladeshi ny vahoaka Bangladeshi mba hilaza ny fihetsiketsehany manohitra ny fitsaram-bahoaka sy ny mpitarika ny mpanohitra.
Manakaiky ny 200 ny olona maty ary an'arivony no naratra tamin'ny fifandonana teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana hatramin'ny fiandohan'ity taona ity.
Bangladesh dia niaina tantara feno korontana nopotehin'ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila, fikorontanan-dra ary loza voajanahary.